Nahazo fitaovana ara-pahasalamana ny distrikan’Analalava - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Namaly ny fangatahan'i Djaosera Irénée solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao Analalava, ny praiminisitra lehiben'ny governemanta. Kobany miisa 15 sy Kidôro 15, Bouteille d'oxygène sy fitoeran'ny sérums, no fantatra fa nomena ny hopitaly ao Analalava.
Izany dia mba ho fanajana ny fepetra mahakasika ny hamehana ara-pahasalamana.
« Manomboka mitodika amin’ny distrika Analalava ity fitondram-panjakana » hoy Djaosera Irénée, solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ity ditsrika ity.
Hatramin'izay manko dia natao ankilabao hatrany Analalava teo amin’ny lafin'ny rehetra, maizina teo ampototry ny mazava rahateo, tao anatin'ny taona maro.
Hopitaly Analalava izay tsy nisy fitaovana mihitsy hatramin’izay, izao nisitraka fitaovana vaovao izao. Izay tonga amin’ny fotoanan’ny tokoa amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Nitondra teny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana, ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina, Praiminisitra, Christian Ntsay ny solombavambahoakan'i Madagasikara amin'ny anaran'ny vahoaka ao Analalava, tamin'ny fitsinjovan'izy ireo manokana ny vahoakan'ny Analalava.
Nohamafisiny ihany koa ny fangatahana efa nataony, mahakasika ny làlana mirefy 63km RN 31A Antsohihy Analalava. Olana izy io ankehitriny noho ny haratsiany. Miteraka olana eo amin’ny famoahan’ny tantsaha ireo vokatra isan-karazany.
Ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika amin’izao fotoana izao ka niantso ny rehetra izy mba samy hitandrina amin’ny izao valanaretina lalovan'izao tontolo izao.
Nisaotra ny fanjakana ihany koa izy, tamin’ny nanendreny médecin Inspecteur vaovao izay naharesy lahatra azy ny fomba fiasany.
Tsy mitsahatra mikatsaka izay mahasoa ny vahoaka hatrany izahay hoy ihany ity solombavambahoaka ity. Mbola betsaka ireo tokony hatao mba hitondra fandrosoana, toy ny lalana izay voalaza etsy ambony, ny tohandrano entina mamboly, sy ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany ilaina amin’ny fampandrosoana, eo ihany koa ny lafiny fandriam-pahalemana.
Marihina fa ny CRCO-SOFIA amin’ny alalan'ny Goverinora Gal Lylyson René de Roland, no mitsinjara ireo fanomezana ireo.